ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်အမေဇုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယူရို ၃၀ ကိုလျှော့စျေးပေးသည် Gadget သတင်း
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်အမေဇုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယူရို ၃၀ ကိုလျှော့စျေးပေးသည်
Villamandos | | အမေဇုံ, မိုဘိုင်း
Black Friday နှင့် Cyber ​​တနင်္လာနေ့သည်သမိုင်းဝင်ခဲ့ပြီး၊ စျေး ၀ ယ်ခြင်းသည်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သောခရစ်စမတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်လာကြသည်။ In အမေဇုံ သူတို့သိသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ထုတ်ကုန်အမြောက်အမြားအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောအထူးလျှော့စျေးများကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ရယူလိုကြသည်။ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ကဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီ၏ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လျှော့စျေးရှိသည့်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစမတ်ဖုန်းများ.
အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းသည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သောကိရိယာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသစ်အဖြစ်မရောင်းချနိုင်ခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းမှာအတူတူပင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်သိထားသင့်သည်။ terminal အသစ်ထက်ပိုသည်။ ဈေးနှုန်းကိုသူ့ဟာသူလျှော့ချပြီးပြီဆိုလျှင်လျှော့စျေးယူရို ၃၀ ကိုထည့်ရမယ်။
ဒီအမေဇုံမြှင့်တင်ရေးအသစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိသက်တမ်းရှိလိမ့်မယ် ဒီခရစ္စမတ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းတစ်ခုပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ပေးဖို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံသင့်ဘူး၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းထက်မပိုသင့်ဘူး။
ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်နေသောသင့်အတွက်သူများအတွက်အန္တရာယ်မရှိသောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှင်းပြချက်ကိုသင်နားလည်လာလိမ့်မည်။
3 ဒီအခွင့်အရေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Amazon ကကျွန်တော်တို့ကိုစမတ်ဖုန်းတွေကမ်းလှမ်းရုံသာမက
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည့်စမတ်ဖုန်းသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကြောင်းပြချက်အသစ်များဖြင့်အသစ်စက်စက်အဖြစ်ရောင်း။ မရနိုင်ပါ။။ ပွင့်လင်းတယ်၊ သေတ္တာပျက်စီးသွားတယ်၊ (သို့) သူနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတချို့ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းပြချက်တချို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်မှာအမြဲတမ်းဖော်ပြသင့်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအချိန်တိုင်းသင်အမြဲတမ်းအသိပေးသင့်တယ် ထုတ်ကုန်ပြန်လည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖော်ပြထားသည်။
စမတ်ဖုန်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားခြင်းလို့မှတ်ယူရမယ့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့အသုံးပြုသူကပြန်ဖွင့်တာတောင်မဖွင့်ဘဲပြန်သွားတာဖြစ်တယ်။ ၎င်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းသည်၎င်း၏အခြေအနေကိုပြန်ဆုံးရှုံးသွားသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စျေးနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်မပျက်စီးသေးဟုမဆိုလိုပါ။
Amazon တွင်ရောင်းချသောသူများသာမကပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအားလုံးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးဖြစ်သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ terminal ကို defective box တစ်ခုရှိခြင်းကြောင့် reconditioned လုပ်ထားသည်ဟုယူဆခဲ့လျှင်၊ ဤချို့ယွင်းချက်ကိုမပြုပြင်နိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကို device ၏ဖော်ပြချက်တွင်အမြဲဖော်ပြလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာပြောရမယ်ဆိုရင် Amazon ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေအတွက်ယူရို ၃၀ လျှော့စျေးပေးရုံသာမကအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း ၁၀,၀၀၀ ကျော်ရဲ့စာရင်းမှာပါ ၀ င်ပါတယ်။
ယူရို ၃၀ ၏လျှော့စျေးမှအကျိုးခံစားရရန်အတွက်ယူရို ၁၀၀ ထက်ပိုရမည်တကယ်လို့များငါတို့ဝယ်တော့မယ့်ဟာကမိုဘိုင်းပစ္စည်းပဲ။ အော်ဒါမှာပြီးတာနဲ့ဒီလျှော့စျေးကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် terminal ကိုစျေးနှုန်းသည်နောက်ဆုံးစျေးမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမိန့်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေါ်လာမည့်လျှော့စျေးကိုကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ရပါမည်။
Motorola Moto G (8GB) - ၉.၉၀ ယူရို
Sony Xperia Z3 - ၉.၉၀ ယူရို
Meizu M2 မှတ်စု - ၉.၉၀ ယူရို
Meizu MX4 - ၉.၉၀ ယူရို
Wiko သက်တံ့ရောင် Jam - ၉.၉၀ ယူရို
ဝီကိုအဝေးပြေး - ၉.၉၀ ယူရို
Lumia 650 - ၉.၉၀ ယူရို
Alcatel One Touch Idol2Mini - ၉.၉၀ ယူရို
အတွက်စုစုပေါင်း အမေဇုံပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Smartpon စာရင်း မိုဘိုင်းထုတ်ကုန် ၂၃ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်၊ တချို့ကဒီကံမကောင်းပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးကိုငါတို့ထုတ်ဝေတဲ့အချိန်မှာ ၀ ယ်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီအရောင်းမြှင့်တင်မှုကြာရှည်မည့်အချိန်အတွင်း၊ ယခုအချိန်တွင်မရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များသည်surelyကန်အမှန်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးရရှိနိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းကိုသင်တွေ့မြင်လျှင်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှတွန့်ဆုတ်ပြီး ၀ ယ်ပါ။ အမေဇုံမှထုတ်ပေးသည့်အရည်ရွှမ်းသောအထူးလျှော့စျေးသည်အချို့သောကိရိယာများသည်ကြာရှည်မခံပါ။
ဒီအခွင့်အရေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Amazon ကကျွန်တော်တို့ကိုစမတ်ဖုန်းတွေကမ်းလှမ်းရုံသာမက
ခင်ဗျားတို့အရင်ကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်ထပ်ခါထပ်ခါပြောဖို့တော့မဟုတ်ဘူး အမေဇုံကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်ယူရို ၃၀ လျှော့စျေးပေးရုံသာမကအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များစာရင်းသို့လည်းပါ ၀ င်သည်။။ သင်လျှော့စျေးပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် အောက်ပါလင့်ခ်.
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေလိုပဲယူနစ်အတော်များများဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိပြီးလက်တွေ့ကျကျထူးခြားတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကသင့်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းလျှင်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်မဆိုလျှော့စျေးအခြေအနေများသည်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းများအတွက်အမေဇုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယူရို ၃၀ ကိုလျှော့စျေးပေးသည်
ဤရွေ့ကားသင်ပြီးသား HBO စပိန်တွင်တွေ့မြင်ခံစားနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးစီးရီးအချို့ဖြစ်သည်